अमेरिकी कम्पनी Cannondale साइकिल बनाउँछ 2000 देखि वर्ष। मोडेल लागि फ्रेम अक्सर एल्यूमीनियम मिश्र धातु बनेको छन्। मूल्यह्रास मोडेल प्रणाली एकदम भिन्न छन्। Bushings प्रयोग गरिन्छ, सामान्यतया ग्रह प्रकार। केही मोडेलहरू बुट संग सुसज्जित छन्। एक caliper प्रयोग साइकिल को बग्गी। यो बजार मा एक औसत गुणस्तर मोडेल बारे 45 हजार। RUB छ।
मोडेल विवरण "ट्रेल 7"
यी बाइक Cannondale ग्राहकहरु उत्कृष्ट समीक्षा दिनुपर्छ। सबै मालिक को पहिलो आफ्नो कम वजन भन्छन्। यस मामला मा फ्रेम धेरै व्यापक प्रयोग गरिएको छ। Seatpost को प्रस्तुत मोडेल देखि कम अवतरण सेट गरिएको छ। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई राम्रो सजिलो लिन। सिधै सहज सीट प्रदान गर्दछ।
मनोरञ्जनको लागि, यो मोडेल राम्रो फिट। तर, अझै त्यहाँ उनको मा कमीकमजोरी। सबै को पहिले खराब स्टीयरिंग स्तम्भ छ। सी खरोंच धेरै चाँडै मेटियो। यसलाई समय समयमा सर्किट जाँच गर्न आवश्यक पनि छ। यस मामला मा पेडल, प्लास्टिक प्रयोग। तिनीहरू scrolled छन्, तर कहिलेकाहीं तपाईं बेयरिंग परिवर्तन गर्न छ। रूपमा कम 47.500 रूपमा rubles हुन सक्छ एक साइकल Cannondale ट्रेल7किन्न।
बाइक को समीक्षा "ट्याङ्गो 6"
धेरै मालिकहरूले ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम गुणस्तर लागि तोकिएको Cannondale पहाड बाइक मूल्यांकन गर्छौं। सक्रिय विश्राम मोडेल उपयुक्त छ, र अधिभार फ्रेम डर छैन। पालो मा, स्पंज सिस्टम गुणस्तर स्थापित छ। लोड मा साइकल को अगाडि काँटा भारी सामना गर्न सक्छन्। केहि कमियां बीच उल्लेख गर्नुपर्छ नाजुक रड।
यस मामला मा Shifters, सेट सानो र स्विच पटक को गति असहज। म पकड बाइक प्रदान इस्पात। मालिकको अनुसार, तिनीहरूले बिस्तारै मिट छन्। पेडल स्थापित प्लास्टिक, र तिनीहरूलाई grooved छन् ओभरले। यसलाई। RUB 45 हजार को क्षेत्र मा हाम्रो समय निर्दिष्ट गरिएको बाइक 29 "Cannondale हुनुपर्छ।
मोडेल अवलोकन "ट्रेल 4"
यो बाइक किशोरकिशोरीहरूको लागि सिद्ध छ। फ्रेम उहाँले टिकाउ प्रयोग र स्टीयरिंग स्तम्भ उच्च रोपण सेट गरिएको छ। सीधा seatpost एल्यूमीनियम मिश्र धातु बनेको छ, त्यसैले सानो वजन। यस मामला मा pedals scrolled छन्। प्लग बन्द मा बियरिंग्स प्रदान गरिन्छ। मोडेल मा टर्च, तपाईं आवश्यक भएमा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रंक त्यो प्रदान गरिएको छैन। Rims 27 इन्च को एक व्यास संग बाइक सज्जित। तपाईं 48 हजार को मूल्य मा यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। RUB।
मानिसहरू मोडेल बारे "द्रुत 6" के भनिरहेका छन्?
भने साइकल संग निर्मित छ हाइड्रोलिक ब्रेक। यस मामला मा Seatpost, उचाइ समायोजित गर्न सकिन्छ। सीधा काठी प्रदान साँघुरो छ। खरीदारों अनुसार, मोडेल सुविधाजनक छ व्यवस्थापन र Highlands यसलाई राम्रो तरिकाले व्यवहार। Shifters मार्गदर्शन प्रकार प्रयोग।
को स्टीयरिंग स्तम्भ एल्यूमीनियम मिश्र धातु बनेको छ र व्यास 8 इन्च छ। झाडी, बारी मा, एक 80 मिमी मा माउन्ट, र यो इस्पात बनेको छ। 27 इन्च लागि उपयुक्त एक साइकल लागि रिम। Calipers, यो मामला स्थापित इस्पात मा। बाइक को कुल वजन 14.5 किलो छ। दोकान मा यो किन्न हुन सक्छ 36 200 rubles।
"ट्याङ्गो 7" को उपभोक्ता समीक्षा
धेरै खरीदारों यी बाइक शहर यात्राको लागि मात्र उपयुक्त Cannondale भन्ने विश्वास गर्छन्। तर, cushioning सिस्टम तिनीहरूले एक कठोर प्रकार छ, र त्यो मिलान को डर छैन। यसलाई पूर्ण मोडेल 13.4 किलो लोड वजन। यस मामला मा, पेडल मंच माउन्ट।
हब स्विच सिधै ग्रह प्रकार छन्। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, माला समस्या दुर्लभ छन्। तर, मोडेल को बेफाइदा अझै पनि छ। सबै को पहिलो यो तीव्र वेयर manetok उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा पनि ढुवानी खण्डन। यो बाइक प्रयोगकर्ताको रूपमा कम 33.500 रूपमा rubles गर्न सक्षम छ किन्न।
नयाँ मोडेल "Alt 3"
यी Cannondale बाइक किशोरकिशोरीहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हो। आफ्नो सबै भन्दा कम अवतरण प्रदान गरिएको छ, र स्तम्भ चौडाइ मात्र 56 सेमी छ। तुरुन्त बिभाजनमा इस्पात र प्रदान calipers देखि बनेको छ काठी। Handgrip यस मामला एल्यूमीनियम प्रयोग गरिएको।
तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास छ भने, तपाईं धेरै सहज भएको बाइक, र आफ्नो काम ठीक को स्थिरीकरण नियन्त्रण। समस्या कहिलेकाहीं मात्र shifters संग उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। केही अवस्थामा, छड Fray जडान। साथै, मालिक समय समयमा गति changers निरीक्षण गर्नुपर्छ। रूपमा 35 हजार रूपमा कम हुन सक्छ हाम्रो समय मा एक बाइक किन्न। RUB।
बारेमा "Felsiti" उपभोक्ता राय
Cannondale बाइक ठूलो माग रहेको ग्राहकद्वारा प्रदान। रमा बलियो स्थापित र त्यहाँ एक "Promax" श्रृंखला छ इस्पात बिभाजनमा 6061. बाहिर बनाइएको यो अवस्थामा छन्। को स्टीयरिंग स्तम्भ साँघुरो सेट गरिएको छ। सीट पोस्ट गर्ने स्क्रू गर्न निश्चित छ, र आवश्यक भएमा यो हटाउन सकिँदैन। अगाडि स्लिभ, मोडेल एक ग्रह प्रकार प्रदान गर्दछ। को ब्रेक सिस्टम सामान्य हाइड्रोलिक र मार्गदर्शन स्विच संग सज्जित छ उपलब्ध छ। एउटा सानो फ्रेम मा Takeaway।
सीधा स्टीयरिंग स्तम्भ मा माउन्ट shifters। तपाईं उपभोक्ताहरु को समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, आस्तीन समस्याहरू केही दुर्लभ छन्। यस मामला मा, वेग स्विच राम्ररी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। Cushioning सिस्टम हार्ड माउन्ट र कहिलेकाहीं यो बेचैनी ल्याउँछ। पकड मोडेल चाँडै थाक्नु र समय समयमा परिवर्तन हुनुपर्छ। पनि उल्लेखनीय pedals गुणस्तर छ। तिनीहरूले प्लास्टिक को छन्, तर रबर को अस्तर मजबूती तिनीहरूलाई सुरक्षा। पसलमा यो वस्तु केवल 33 500 rubles हुन सक्छ खरीद।
"ट्रेल 3" को लागि उपभोक्ता समीक्षा
सबैभन्दा खरीदारों यो बाइक बारेमा सकारात्मक छन्। यो पसलहरुमा यो लायक छ सस्ती छ, तर भागहरु गुणस्तर यसलाई उच्चतम स्तर मा छ। सीधा प्रयोग मोडेल स्टील पकड वाला। Shifters, बारी मा, प्लास्टिक को छन्। अगाडि derailleur एक "Shimano" श्रृंखला छ। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई संग समस्या दुर्लभ छन्। यस मामला मा फ्रेम आघात-प्रतिरोधी बनेको छ।
यो उच्च गुणवत्ता ब्रेक सिस्टम उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। बाइक धेरै वजन, तर यो ह्यान्डलिङ कुनै प्रभाव खराब छ। Cushioning सिस्टम एक मध्यम कठोरता छ, र शहर हिँड्छ लागि यो राम्रो छ। यस मामला मा टेप निर्माता अलिकति हटाउने संग प्रदान गरिएको छ। परमवीर चक्र जस्तै मानक उपलब्ध काठी। आवश्यक छ भने, तपाईं यो आफैलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। मंच pedals प्रयोग गरिन्छ र एक सुरक्षा प्लेट तिनीहरूलाई बंधुआ छ। Cannondale बाइक 35 हजार को क्षेत्र मा बजार मा सूचीबद्ध छन्। RUB।
कताई Daiwa - कुलीन बजेट श्रेणी निपटने
जो Bresser चयन दूरबीन? लोकप्रिय मोडेल, वर्णन, मालिकहरूको समीक्षा समीक्षा
बच्चाहरु र वयस्क लागि सबैभन्दा सुन्दर बाइक। सुन्दर शहर बाइक
जहाँ राम्रो inflatable डुङ्गा लागि बिजुली मोटर्स प्रयोग गर्ने?
मोबाइल गाइड: जडान गर्न कसरी र मेगाफन रोमिङ कसरी असक्षम
इमोज (स्याउको रूख): वर्णन, विवरण, समीक्षाहरू
आफ्नो पछाडि पुरुष टाटु। लोकप्रिय डिजाइन
तेल सानो ट्युमर, यो को हटाउनु कसरी।
Crochet। फूल र कल्पना
पागल, पोस्ता र किसमिस संग केक। धेरै भेरिएसनहरूमा
"Pentovit" र के अवस्थामा कसरी लिन यो निर्धारित छ?
कति चिन्चिला घरमा बस्न?